साउन महिनामा महिलाको पहिरनमा परिवर्तन आउँछ । नियमित भन्दा उनीहरुले लगाउने लुगा फरक हुन्छ ।
साउनमा हरियो, रातो र पहेलो रंगको कपडामा महिलाले जोड दिएका हुन्छन् भने मेहेन्दी विशेष रुपमा लगाउने प्रचलन हुन्छ । साउन महिनामा हातमा मेहेन्दी नभर्ने युवती सायदै पाइन्छन् ।
साउन शुरु भएसँगै महिलाको शृंगार घरहरुमा र चुरा पसुलमा ग्राहकको भीड लागेको छ । हरियो रातो र पहेलो रंगको चुरा दुवै हातमा नापिरहेका युवती र महिलाको भीड पसलहरुमा देख्न पाइन्छ । पसलहरुमा नयाँ नयाँ मोडल र स्वरुपमा चुराहरु र मेहेन्दीका डिजाइन पाइन्छ ।
किन लगाउँछन् हरियो ?
ज्योतिष प्रविण मिश्रका अनुसार हरियो रंग सौभाग्यको रंग हो । श्रावण महिना हरियालीको महिना पनि हो र यो महिना प्रकृतिसँग आफूलाई जोड्ने महिना पनि हो ।
यसका कारण शिवलाई जल अर्पण गरेर प्रकृतिसँग नजिक हुने अवसर पनि हो । जसका कारण यो महिनामा हरियो रंगका कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिकिने गरिएको हो । जसका कारण प्रकृतिको साथ रहने र भाग्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ ।
शास्त्रमा प्रकृतिलाई इश्वरको रुपमा लिइएको छ । जसका कारण प्रकृतिको पूजा गरिने गरेको छ । हरियो चुरा र साडी लगाएर नारीले प्रकृतिलाई विशेष पुजा अर्चना गर्नुपर्छ जसका कारण आफू र पतिको आयूसमेत बढ्छ ।
हरियो रंग बुद्ध ग्रहको प्रतिक हो । बुद्ध ग्रह भविष्य तथा व्यापारसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तोमा हरियो रंग लगाउँदा मन प्रसन्नता हुन्छ भने घरमा सम्पन्नता छाउँछ ।
शिव भगवान प्रसन्न
श्रावणमा हरियो पहिरदा शिव भगवान खुसी हुने धार्मिक विश्वास छ । भगवान शंकर प्रकृतिसँग विशेष रुपमा जोडिएका छन् ।
जब भक्तले स्वयंलाई प्रकृतिसँग नजिक ल्याउँछन् तब भगवान शिवले उनीहरुको मनोकामना पूरा गर्ने विश्वास गरिन्छ । श्रावणमा हरियो रंगको चुरा पहिरिने महिलासँग भगवान विष्णुसमेत प्रसन्न हुनेछन् ।
हरियो रंग प्रकृति, उर्वरता, बहुलता, सौभाग्य र सकारात्मक उर्जाको वृद्धिको प्रतिक हो । हरियो उपचारको रंग पनि हो जो मुटसँग जोडिएको हुन्छ ।
उच्च रक्तचापको समस्याका लागि पनि हरियो राम्रो मानिन्छ । विवाहित जोडिको सुमधुर सम्बन्धमा पनि बेडरुमको दक्षिण पूर्वी हिस्सामा हरियो रंग लगाएको खण्डमा दाम्पत्य जीवन सुखी हुन्छ भन्ने वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साउन १, २०७४ मा प्रकाशित
तामाकोसीले तान्यो लगानीकर्ता, यस्तो रह्यो कारोबार
कारोवार शुरु भएको एक सातामै माथिल्लो तामाकोशी उत्कृष्ट १० कम्पनीको सूचीमा
दैनिक ७ रुपैयाँमा ज्यामी काम गरेका भीम बने ७ उद्योगका मालिक
एएफसी यू–२३ छनोट : नेपालले पहिलो खेल ओमनसँग खेल्ने काठमाडौं – थाइल्याण्डमा सन् २०२० मा आयोजना हुने एएफसी यू–२३ च्याम्पियनशिप फुटबलका लागि छनोट चरणको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानको सामना गर्ने भएको छ । एशियन फुटबल...
पहिलो चरणमा काठमाडौंका दुई स्थानमा आकाशे पुल बन्ने, कहाँ-कहाँ बन्दैछ पुल ?
तेह्रौं साग निर्धारित मितिमा नहुने
प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख
राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सवाल जवाफ, कांग्रेस सांसद १५ मिनेट उभिएको उभियै
सुडानमा राष्ट्रपतिविरुद्धको विरोध प्रदर्शन जारी